तिनीहरूलाई जाने बिना इन्स्टाग्राममा स्क्रिनशट बनाउनुहोस्
वर्ष २०१ 2018 सामाजिक नेटवर्क को प्रशंसक को लागी राम्रो लाग्दैन। स्न्यापचेटले भर्खरै एक कुरूप अपडेट र इन्स्टाग्रामले एक्टिवा सुविधा प्रस्तुत गर्‍यो। अन्दाज गर्नुहोस्? त्यो सबै होइन। इन्स्टाग्रामले नयाँ फिचरको परीक्षण गर्दैछ जहाँ अर्को व्यक्तिको लागि सूचित गरिनेछ यदि तपाईंले उनीहरूको कथाको स्क्रिनशट लिनुभयो भने। हो, तपाईं यसलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो। तर चिन्ता नलिनुहोस्। यस पोष्टमा, हामी तपाईंलाई कसरी भन्ने छौं तिनीहरूलाई जाने बिना एक इन्स्टाग्राम कहानीको स्क्रिनशट बनाउनुहोस् र अर्को व्यक्तिलाई सूचित नगरी।
सुविधा हाल केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि परीक्षण गरीरहेको छ। एकचोटि तपाईंले यो प्राप्त गर्नुभयो, तपाईंलाई चेतावनी सूचना देखाइनेछ जुन यसले संकेत गर्दछ कि व्यक्तिले देख्न सक्छ कि तपाईंले स्क्रीनशट लिनुभयो। कृपया याद गर्नुहोस् कि सूचना मात्र एक पटक देखाईनेछ। त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
ACTUALIZACIÓN: इन्स्टाग्रामले यस सुविधाको परीक्षण गर्न रोकेको छ र दर्शकले कथाको स्क्रिनशट लिने बित्तिक प्रत्येक पटक मूल पोस्टरलाई सूचित गर्दैन।
सुविधा सुरु हुनु अघि, यो सामान्य प्रश्न थियो कि यदि व्यक्तिहरूले उनीहरूका तस्विरहरू इंस्टाग्राममा खिच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर। ठीक छ, उत्तर अझै इंस्टाग्राम पोष्टहरूका लागि नकारात्मक छ, तर दुर्भाग्यवस चीजहरू स्टोरीहरूको लागि परिवर्तन भएका छन्।
के परिवर्तन भयो
इन्स्टाग्रामले लगभग सबै स्नैपच्याट सुविधाहरू प्रतिलिपि गरेको छ, जस्तै कथाहरू, अनुहार फिल्टरहरू, इत्यादि। र अब तिनीहरू पनि स्क्रीनशट अधिसूचना समारोह उधारो।
यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, यो समारोह इन्स्टाग्रामको सीधा सन्देशमा पहिले नै अवस्थित छ, जहाँ यदि तपाईं च्याटको स्क्रीनशट लिनुहुन्छ जुन हराउछ, व्यक्तिलाई सूचित गरिनेछ। उही कथाहरूको लागि जान्छ।
यदि तपाइँ स्क्रिनशट लिनुहुन्छ वा ईतिहासको स्क्रिन रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने, प्रयोगकर्ताले एक सूचना प्राप्त गर्नेछ कि उसलाई सूचित गर्दै कि उसले उसको कथाको स्क्रिनसट लिएको छ।
थप रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूलाई स्क्रिनशट लिने व्यक्तिको नामको छेउमा ईतिहास दृश्य अनुभागमा छुट्टै आइकन पनि देखाइनेछ।
कसरी गोप्य स्क्रीन क्याप्चरहरू लिन सकिन्छ
इन्स्टाग्राममा उनीहरूलाई जानेका बिना स्क्रीनशटहरू लिन चार तरिकाहरू छन्:
तेस्रो पक्ष अनुप्रयोगहरू
अर्को फोन प्रयोग गर्नुहोस्
1 हवाइजहाज मोड
हवाइजहाज मोडमा स्क्रिनशटहरू लिनु भनेको सब भन्दा पुरानो युक्तिहरू मध्ये एक हो जुन स्नापचट प्रयोगकर्ताहरूले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ उनीहरूको लागि काम नगरेसम्म। यद्यपि यो अहिलेको रूपमा इन्स्टाग्रामको लागि काम गर्दछ।
यो तपाईले गर्नु पर्ने कुरा हो:
1 चरण: तपाईंको फोनमा इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग सुरू गर्नुहोस् र तपाईंले क्याप्चर गर्न चाहानु भएको कथा खोल्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि यो पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको छ।
2 चरण: अब तपाइँको फोन सेटि settingsहरूमा जानुहोस् र हवाइजहाज मोड सक्षम गर्नुहोस्। यसले तपाईंको उपकरणमा सबै सक्रिय जडानहरू अक्षम गर्दछ, जस्तै मोबाइल डाटा, वाइफाइ, ब्लुटुथ, आदि।
3 चरण:aएक पटक हवाइजहाज मोड सक्रिय भएपछि, इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग फेरि खोल्नुहोस् र तपाईंले क्याप्चर गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कहानी छुनुहोस्।
4 चरण: इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग छोड्नुहोस् र केहि सेकेन्ड पर्खनुहोस्। तब उडान मोड असक्षम गर्नुहोस् सबै नेटवर्क जडानहरू सक्रिय गर्नका लागि।
यदि तपाईंले ध्यानपूर्वक सबै चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो भने, इन्स्टाग्रामले अन्य व्यक्तिलाई सूचित गर्दैन।
2 वेब संस्करण
यदि तपाईं चट्टानमुनि बस्नुहुन्न भने, तपाईंलाई थाहा छ इन्स्टाग्रामको पनि एक वेबसाइट छ। जब वेबसाइटले तपाईंलाई पोष्ट र कथाहरू ब्राउज गर्न अनुमति दिन्छ, यसले तपाईंलाई फोटोहरू अपलोड गर्न र सन्देशहरू पठाउन वा प्राप्त गर्न अनुमति दिँदैन।
हामी कथाहरूको लागि स्क्रीनशट लिनको बारेमा चिन्तित भएकोले, वेबसाइट हाम्रो उद्धारमा आउँदछ। चाखलाग्दो कुरा, यदि तपाईं इन्स्टाग्राम वेबसाइटमा एक कहानीको स्क्रीनशट लिनुभयो भने, तपाईं प्रयोगकर्तालाई सूचना पठाउनुहुन्न।
त्यसपछि, अर्को पटक तपाईं स्क्रीनशट लिन चाहानुहुन्छ, इन्स्टाग्रामको वेब संस्करण खोल्नुहोस्। कठिन, तर यो काम गर्दछ।
3 तेस्रो पक्ष अनुप्रयोगहरू
त्यहाँ धेरै तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई अर्को व्यक्तिलाई सूचित नगरी कथाहरू बचत गर्न अनुमति दिनेछ। जबकि केहि तपाइँको लागि काम गर्न सक्छ, अरूले गर्दैन। वास्तविक स्क्रिनशट लिनु अघि तपाईंको साथीहरूसँग प्रमाणीकरण र पुष्टि गर्नु राम्रो हो।
केहि अनुप्रयोगहरू जुन तपाईं Android मा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:
इन्सटाग्रामका लागि स्टोरी सेभर - कहानी सहायक
Instagram को लागी कहानी बचत गर्नुहोस्
इन्स्टाग्रामको लागि स्टोरी रिपोस्टर
इंस्टाग्रामका लागि स्टोरी पोस्ट गर्नुहोस्
तपाईं कुनै पनि प्लेटफर्ममा कथाहरू डाउनलोड गर्न स्टोरीसिग वेबसाइट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
4 अर्को फोन प्रयोग गर्नुहोस्
यदि माथिका सबै विधिहरू असफल भए भने, इन्स्ट्या कथाहरू बचत गर्न पुरानो प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्। केवल तपाईंले आफ्नो फोनमा क्याप्चर गर्न चाहानु भएको कथा खोल्नुहोस्, र तपाईंको दोस्रो फोनबाट त्यो कथाको फोटो लिनुहोस्। त्यो हो। सबैभन्दा सजीलो (यद्यपि एक बिट सीडी) उनीहरूलाई नबुझीकन इन्स्टाग्राममा स्क्रिनशट बनाउन।
इतिहास क्याप्चर गर्नु जरुरी छ?
खैर, त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। न्याय नगर्नुहोस्
उदाहरण को लागी, तपाईलाई मनपर्ने र किन्न चाहेको व्यक्तिको कथामा त्यहाँ उत्पादन छ। तपाईंले भर्खर एक स्क्रीनशट लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई प्रयोग गर्नु अघि। दुर्भाग्यवस, अब त्यसले तपाइँलाई हरामी जस्तो देखिने बनाउँदछ।
त्यस्तै गरी, यदि तपाइँ यसलाई वालपेपरको रूपमा राख्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं छविको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुनेछ। तेस्रो, व्यक्तिहरू एक चीजको स्क्रीनशट लिन्छन् यदि तिनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छन् भने।
माथिका युक्तिहरू अबबाट काम गर्दा, हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा सावधान रहन सुझाव दिन्छौं। थप रूपमा, बदमाशी पनि खराब छ। यी चालहरूको दुरुपयोग नगर्नुहोस्।
के तपाईंलाई इन्स्ट्राग्राममा उनीहरूलाई जाने बिना नै स्क्रिनशट बनाउनको लागि कुनै अरू विधि थाहा छ? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्।
इन्स्टाग्राम कथाहरूको लागि निःशुल्क टेम्पलेट अनुप्रयोगहरू
पीसी र एन्ड्रोइडमा कसरी इन्स्टाग्राम प्रोफाइल फोटोहरू डाउनलोड गर्ने